China Powder Auger Filler fanamboarana sy orinasa | tampon
Ambonin'izany, ny fotoana famokarana antonony dia 7 andro fotsiny amin'ny famolavolana mahazatra.
Ankoatr'izay, azonay atao ny manamboatra ny mpameno auger arakaraka ny takinao. Izahay dia afaka mamokatra ny mpameno Auger mifototra amin'ny sary famolavolana sy ny sary famantarana na ny orinasa momba ny marika milina. Azontsika atao koa ny manome ny ampahany feno. Raha manana fikirakirana zavatra ianao, dia azonay ampiasaina ihany koa ny marika manokana.
Teknolojia lehibe an'ny servo auger filler
■ Motera Servo: Mampiasa motera Delta servo Taiwan izahay hifehezana ny auger, mba hahatratrarana ny lanjan'ny famenoana ny lanjany. Ny marika dia azo tendrena.
Ny servomotor dia actuator rotary na actuator linear izay ahafahana mifehy tsara ny toerana angular na linear, ny hafainganana ary ny hafainganana. Izy io dia misy motera mety ampiarahina amin'ny sensor mba hanomezana hevitra momba ny toerana. Ilaina koa ny fanaraha-maso somary be pitsiny, matetika maodely voatokana natao manokana hampiasaina amin'ny servomotor.
■ Fototra afovoany: ny singa afovoan'ny auger no ampahany lehibe indrindra amin'ny mpameno auger.
Izahay dia miasa tsara amin'ny singa afovoany, ny fanodinana ary ny fanangonana. Ny fahitsiana sy ny fanangonana dia tsy hitan'ny maso mitanjaka ary tsy azo ampitahaina am-pahibemaso, fa kosa hiseho mandritra ny fampiasana azy.
■ concentricité avo: tsy ho avo ny marina raha tsy misy concentricity avo amin'ny auger sy shaft.
Mampiasa tsangana marika malaza eran'izao tontolo izao isika eo anelanelan'ny maotera auger sy servo.
■ Masinina mazava ho azy: mampiasa milina fikosoham-bary izahay mba hikosahana auger habe kely, izay mahatonga ny auger hanana halavirana sy endrika tena marina.
■ Fomba famenoana roa: azo avadika eo anelanelan'ny maody lanja sy ny fatran'ny volavola.
Ny volon'ny vovo-bolo nateraky ny visy nanodina manodidina dia raikitra. Ny mpanara-maso dia hanao kajy ny isan'ny fihodinan'ny visy fa hahatonga azy hahatratra ny tanjon'ny famenoana.
Misy sela enta-mavesatra eo ambanin'ny lovia famenoana handrefesana ny lanjan'ny famenoana ara-potoana.
Ny famenoana voalohany dia haingana sy famenoana masobe hahazoana 80% ny lanjan'ny famenoana kendrena.
Ny famenoana faharoa dia miadana sy marina mba hamenoana ny ambiny 20% arakaraka ny lanjan'ny famenoana ara-potoana.
vidin'ny milina mpamenaka auger
Tsindrio eto raha hahazoana amidy ny auger filler filler na auger filler.
Karazana milina mpameno Auger
Auger Filler semi-mandeha ho azy
Ny mpameno auger semi-automatique dia mety amin'ny famenoana haingam-pandeha ambany. Satria mila mpandraharaha hametraka tavoahangy eo ambony lovia eo ambanin'ny mpameno izy ary manalavitra tavoahangy aorian'ny famenoana tanana. Izy io dia mahazaka fonosana na tavoahangy na fonosana. Ny hopper dia manana safidy vy tsy misy fangarony. Ary ny sensor dia azo fidina eo anelanelan'ny sensor fork sy ny sensor photoelectric. Afaka mahazo mpameno auger kely sy maodely mahazatra ianao ary koa mpameno modely avo lenta ho an'ny vovoka avy aminay.
semi-mandeha ho azy Auger Filler miaraka amin'ny Pouch Clamp
Ity semi-automatique ity auger fillermiaraka amin'ny paosy clamp dia mety amin'ny famenoana paosy. Ny kitapom-paosy dia mitazona ny kitapo ho azy aorian'ny fametahana ny takelaka misy ny pedal. Hamaha kitapo ho azy aorian'ny famenoana azy. Ny TP-PF-B12 dia manana takelaka atsangana sy hianjera mandritra ny famenoana mba hampihenana ny lesoka vovoka sy lanja satria io no maodely lehibe. Rehefa manaparitaka vovo-tsavony hatramin'ny faran'ny mpameno hatramin'ny faran'ny kitapo dia hitarika lesoka ny hery misintona satria misy ny sela mavesatra mamantatra ny lanjan'ny fotoana tena izy. Nanangana kitapo ilay lovia ka nifikitra tao anaty kitapo ny fantsom-pamenoana. Ary milatsaka miadana miadana ny lovia mandritra ny famenoana.
1 - 20kg, ≤ ± 0,1-0,2%,> 20kg, ≤ ± 0,05-0,1%
2– 25 isaky ny min
Tsipika mandeha ho azy Auger Filler ho an'ny tavoahangy
Ny tsipika mandeha ho azy auger fillermihatra amin'ny famenoana tavoahangy vovoka. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny feeder vovoka, mixer vovoka, masinina fanidiana ary milina fanamarihana mba hananganana tsipika fanangonana mandeha ho azy. Ny mpampita entana dia mitondra tavoahangy ary ny takona tavoahangy mitazona tavoahangy mba hahafahan'ny mpihazona tavoahangy mampiakatra tavoahangy ao ambanin'ny mpameno. Mandroso ny tavoahangy ny mpampita rehefa avy nameno ho azy. Izy io dia mahazaka tavoahangy samihafa amin'ny milina iray ary mety ho an'ny mpampiasa izay manana fonosana refy mihoatra ny iray.
Tsy voatery ny vy tsy mijanona sy hopper vy tsy manara-penitra. Misy karazana sensor roa misy. Ary azo namboarina izy io mba hanampiana ny lanjan'ny fandanjana an-tserasera mba hahatratrarana tena avo lenta.
Rotary mandeha ho azy Auger Filler
Rotary auger filler dia ampiasaina hamenoana vovoka anaty tavoahangy hafainganam-pandeha. Ity karazana auger filler ity dia mety ho an'ny mpanjifa izay tsy manana afa-tsy tavoahangy iray na roa savaivony satria ny kodiaran'ny tavoahangy dia mahazaka savaivony iray ihany. Na izany aza, ny marina sy ny hafainganana dia tsara kokoa noho ny tsipika auger filler. Ambonin'izany, ny karazana rotary dia manana lanjany sy fandavana an-tserasera. Ny mpameno dia hameno vovoka arakaraka ny lanjan'ny famenoana ny fotoana, ary ny fiasan'ny fandavana dia hahita sy hanaisotra ny lanjany tsy mendrika.
Tsy voatery ny fonony masinina.
≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% ≥500g, ≤ ± 0,5%
20 - 50 isaky ny min
20 - 40 isaky ny min
Fenon-doha avo roa heny ho an'ny vovo
Ny lohan'ny loha auger dia mety amin'ny famenoana haingam-pandeha. Ny hafainganam-pandeha farany ary mahatratra 100bpm. Ny rafitra manamarina sy mandà dia manakana ny fandaniam-poana ny vokatra lafo noho ny fanaraha-maso ny lanjany avo lenta. Izy io dia be mpampiasa amin'ny tsipika famokarana vovo-dronono.
Andalana roa sosona roa famenoana famenoana milanja an-tserasera
Mameno ny fahamarinana
Aminy 100 kapoaka / min (# 502), ambony 120 kapoaka / min (# 300 ~ # 401)
85L (Main) 45L (Manampy)
Rafitra famonosana vovoka
Rehefa miasa miaraka amin'ny milina fanangonana ny mpameno Auger dia mamorona milina fanangonana vovoka izy io. Izy io dia azo ampifandraisina amin'ny sachet horonan-tsary fanaovana famenoana sy ny famehezana, na ny mini doypack fonosana milina sy ny Rotary paosy fonosana na paosy preformed.
Endri-javatra fameno Auger
■ Mihodina auger hahazoana antoka fa marina tsara famenoana.
■ Fanaraha-maso PLC miaraka amin'ny touchscreen, izay mora ampiasaina.
■ Ny motera servo dia mitondra ny auger mba hiantohana ny fahombiazana azo antoka.
■ Esory haingana ny hopper dia fanadiovana mora tsy misy fitaovana.
■ Masinina manontolo dia vy tsy misy fangarony 304 fitaovana.
■ Ny laharam-pahefana mavesatra an-tserasera sy ny fizarana fizarana ny fitaovana dia mandresy ny fahasahiranan'ny fanovana ny lanjan'ny lanjan'ny fiovan'ny hakitroky ny materialy.
■ Tehirizo amina resipeo 20 ao anaty programa mba ho ampiasaina mora any aoriana.
■ Manolo auger mba hamonosana vokatra isan-karazany amin'ny lanjany samihafa, manomboka amin'ny vovoka tsara ka hatramin'ny potika.
■ Amin'ny fiasan'ny fandavana ny lanjany tsy voafetra.
■ Fifaneraserana amin'ny fiteny maro
Lisitry ny fanamboarana. A,
C: boaty fitaovana
Antsipirian'ny mpameno Auger
1. Hopper tsy voatery
Hopper misokatra antsasaky
Hopper split level ity dia
mora misokatra sy madio.
Ny hoppera mitambatra dia mety amin'ny vovoka tena tsara satria ny banga tsy misy elanelana amin'ny tapany ambany amin'ny hopper
2. Fomba famenoana
Azo ovaina eo amin'ny maody mavesatra sy ny fatran'ny volavola.
Ny maody mavesatra dia manana mari-pahaizana ambony kokoa saingy ny hafainganam-pandeha ambany.
Mpameno Auger avy amin'ny maodely tokana an'ny mpamatsy hafa: mode volume
3. Fomba fanamboarana Auger
Vondron-tampon'ny Shanghai: Karazan-tsolika
Tsy misy banga ho an'ny
vovoka hanafina ao anatiny,
ary mora diovina
Mpamatsy hafa: karazana Hang
Hisy vovoka miafina ao anatin'ny faritra misy ny fifandraisana, izay sarotra diovina, ary hanjary ratsy na dia ny vovoka vaovao aza.
4. Kodiarana tanana
Mety amin'ny famenoana tavoahangy / kitapo misy halavany samihafa. Mihodina kodiarana tanana hiakatra sy hidina mpameno. Ary matevina sy matanjaka kokoa noho ny hafa ny mpihazona antsika.
feno welding, ao anatin'izany ny sisin'ny hopper.
6. Fototra moto
7. Fivoahan'ny rivotra
Ny masinina iray manontolo dia vita amin'ny SS304, ao anatin'izany ny fotony sy ny tompon'ny motera, izay matanjaka sy avo lenta.
Ilay manana moto dia tsy SS304.
8. Fandraisana anjara roa
Tavoahangy misy famenoana mahay
mandalo fidirana iray ny lanjany
Tavoahangy misy famenoana tsy mendrika
holavina ho azy ny lanjany
mankany amin'ny fidirana hafa amin'ny fehikibo.
9. Ny habe samihafa amin'ny metering auger sy ny famenoana ny nozera
Ny fitsipiky ny famenoana auger dia ny haben'ny vovoka nidina avy amin'ny auger mihodina faribolana iray dia raikitra. Ka ny haben'ny auger isan-karazany dia azo ampiasaina amin'ny famenoana lanjan'ny lanjany mba hahatratrarana ny marina kokoa sy hitsitsiana fotoana bebe kokoa.
Misy fantsona auger mitovy habe amin'ny auger habeny.
ohatra, dia. 38mm visy dia mety amin'ny famenoana 100g-250
Ny fanarahana dia haben'ny habe kokoa sy ny lanjan'ny lanja famenoana
Ny haben'ny amboara sy ny haavon'ny famenoana
Raha tsy azonao antoka ny haben'ny auger sahaza anao, azafady mifandraisa aminay ary izahay no hisafidy auger mety tsara indrindra ho anao.
Fampisehoana orinasa mpamokatra Auger
Fanodinana fameno Auger
Famolavolana fanampiana amin'ny solosaina
Ahoana ny fitazonana ny mpameno auger?
■ Manampia menaka kely amin'ny rojo moto manetsika indray mandeha ao anatin'ny telo na efa-bolana.
■ Ny tsipika famehezana amin'ny lafiny roa amin'ny hoppera dia mihantitra efa ho herintaona taty aoriana. Soloy izy ireo raha ilaina.
■ Hopper madio amin'ny ara-potoana.
Teo aloha: Blender Blender
Manaraka: Masinina fonosana paosy Rotary
Auger Filler ho an'ny vovoka
Auger Filler amidy
Masinina Filler Auger
Vidin'ny milina mpameno Auger
Vidina Auger Filler
Mpameno Auger kely
Mpameno latabatra Auger Top